के Binance विनिमय भयो र जब बोलपत्रहरू सुरु - Blockchain समाचार
के Binance विनिमय भयो र जब बोलपत्रहरू सुरु
प्रतिज्ञा बावजुद, Binance बिहान अनलाइन भएन. एक दिन भन्दा बढी, प्राविधिक काम शेयर बजार सुरु, जो केवल एक नेतृत्व गर्नुपर्छ “उत्पादकत्व मा अस्थायी गिरावट,” तर अन्ततः विनिमय काम रोकियो र एक अनिश्चितकालीन अवधि लागि तान्नुभयो. हिजो, Binance सीईओ Changpeng Jao ​​त्यहाँ डाटा प्रतिलिपि मा एक अवसर कठिनाई थियो ट्विटर मा यस्तो लेखे, र यो डाटाबेस को एक पुन समिकरण आवश्यकता, जो धेरै घन्टा हुनेछ.
मा 8.00 बर्लिन, Jao फेरि स्थिति टिप्पणी, यसो भनेर विकासकर्ताहरूले तीन समिकरण विधिहरू प्रयास गर्दै, गति मा फरक: 1-2 घण्टा,5घन्टा र9घण्टा क्रमशः. यो बिन्दुमा यो स्पष्ट छ कि छिटो तरिका काम गरेन. नवीनतम जानकारी अनुसार, को “अन्तिम डेटा मान्यता” अब ठाउँ लिइरहेको छ, व्यापार को बहाली मा अपेक्षित छ 15.00 बर्लिन मा. एक घण्टा भित्र अघि शेयर बजार अनलाइन छ, प्रयोगकर्ता आदेश रद्द गर्न सक्षम हुनेछ. साथै, टोलीमा कि लागि कृतज्ञता एक टोकन रूपमा घोषणा “जारी समर्थन”, विनिमय गर्न आयोग कम गर्नेछ 0.03% प्रति कारोबार फरवरी सम्म 24.
तथ्यलाई बावजुद Changpeng Jao ​​बारम्बार विनिमय केवल किनभने प्राविधिक काम अफलाइन छ कि यसो छ कि, र ह्याकर आक्रमण अस्वीकार, केही प्रयोगकर्ताहरू अझै पनि यो एक Hack छ लाग्छ. खासमा, विनिमय टिप्पणी यूहन्ना McAfee द्वारा माग थिए, भन्दै “यसलाई बाध्य भएको थियो सम्म कुनै कम्पनी ह्याकर आक्रमण गर्न स्वीकारे छ।” हिजो राती, McAfee आफ्नो ट्विटर मा लेखेका उहाँले “FUD रोप्न प्रयास गर्दैन,” तर शेयर बजार हैकिंग जानकारी सन्देशहरू दर्जनौँ प्राप्त. पोस्ट गर्न स्क्रिनसट संलग्न छ, जो अन्तर्गत, को Binance लोगो अन्तर्गत, विनिमय कथित यो आक्रमण थियो नै स्वीकार्छन्. र कसैले Makafi समर्थित हुनत, असमर्थित जानकारी शंकास्पद प्रमाण को धेरै गुप्त विशेषज्ञ आरोप: “तस्विर केही द्वारा पठाईएको” पहेंलो “समूह – त्यसैले तपाईंलाई तथ्य प्रमाणित?”, “Photoshop को कहिल्यै सुनेका? परिपक्व, “” तपाईं एक सुरक्षा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ. ”
Makafi त्यो जिद्दी “सिर्फ एक प्रश्न सोध्छन्” र एक सुरक्षा विशेषज्ञ थाह रूपमा “आक्रमण भयो र धन फिर्ता गर्न प्रयास तुरुन्त थिएनन् भने, तिनीहरूलाई पुन को संभावना भित्र शून्य कम छन् 24 घण्टा।” तथापि, Binance सीईओ, जो धेरै ट्वीट जवाफ, भने अझै पनि प्रोग्रामर “FUD वितरण”, र आश्वासन: “हामी तपाईंलाई गलत हो भनेर प्रमाणित हुनेछ।” शुल्क प्रतिक्रिया, Binance Untouched bitcoins र Ethereum ठेगाना संग एक Tweet पोस्ट:
FUD फैलाउन प्रयास छैन, तर म यो एक जस्तै रिपोर्ट दर्जनौँ प्राप्त गरेका. म सिर्फ बुझ्न प्रयास छु. एक सुरक्षा शोधकर्ता रूपमा, म सम्भावित भाडे तुरुन्तै छानबीन भने समाधान गर्न कहीं अधिक सजिलो हो भनेर थाहा. दिन पछि manitude आदेश द्वारा कार्य म्याग्निफाइ. pic.twitter.com/u1PL9Z4tGf
— जन McAfee (@officialmcafee) फेब्रुअरी 8, 2018
के Binance विनिमय भयो?
TradeFred एक छ ...
अघिल्लो पोस्ट:क्यानाडा गुप्त विनिमय Coinsquare $ 30M उठ्छ
अर्को पोस्ट:Coincheck घोषणा फिर्ती अर्को हप्ता सुरु